‘प्रेम जीवनको लागि अनिवार्य चिज हो’ | ReportersNepal.com |
‘प्रेम जीवनको लागि अनिवार्य चिज हो’
2017/01/11 4:19:31 PM
धनराज वास्तविक : काठमाडौं, २७ पुस । मानिस जन्मे देखि मृत्यु प्रयत्न जिउँने चाहनामा अनेकन उत्कण्ठा र चेष्टा गरिरहेको हुन्छ ।
कसैले जीवनलाई काँडा भन्छन् । कसैले फूल भन्छन् । जीवन फूल हो । यसलाई भूलमा परिणथ गरियो भने दुर्घटना हुनसक्छ ।
सपम्पति कमाउँने, धनी बन्ने सपना अधिकांश मानिसको चाहना र सपना हुन्छ तर यस सन्देशको विपरित गीत संगीतमा निक्कै व्यस्त मोडल प्रतिक्षा खड्का विपरित धु्रवमा देखिन्छन् ।
हेर्दा सुन्दर मुहार भएकि, मधुर बोली र साधिन्य स्वभावकी खड्का रामेछापमा जन्मीएकि एक्ली छोरी हुन् । आफ््नो आँट र अरुको भरोशा भनौ या देखासिखिको आधारमा मोड्लीङ क्षेत्रमा आएकी हुन उनि ।
विगत दुईवर्ष देखि अभिनयको थसलमा उनले तिन दर्जन बढि गीतमा सफल अभिनय गरिसकेकि छन् । जीवनलाई संघर्ष र भोगाईको रुपमा स्विकार गर्ने खड्का प्रेमलाई जीवन जीउने माध्यम र प्राकृतिक पद्धत्त करुणाको रुपमा स्विकार गर्छिन् ।
रिपोर्टर्सनेपाल डटकमसँगको अन्तरङ् कुराकानिमा मैले उनलाई यो क्षेत्रमा आउनुको कारण दाम कमाउँनलाई होकि नाम भनेर सोधेको थिए :
– मानवले जीवनमा कमाउँने भनेको कि दाम कि नामनै हो । म दाम भन्दा पनि नाम कमाउँन चाहने व्यक्ति हुँ । त्यसैले म जीवनभर नाम कमाउँने प्रयास गर्नेछु ।
यहि क्षेत्रमा लागि रहने अथवा पेसा परिवर्तन गर्ने ?
– जहाँसम्म सकिन्छ म यहि क्षेत्रमा लागि रहनेछु । तर यो क्षेत्रमा लागेर बाँच्न कठिन छ । आर्थिक र व्यबहारिक रुपमा अलि असहज हुन्छ । तर साथ पाएको खण्डमा अघि बढ्न गाह्रो हुँदैन ।
कुनै चलचित्रमा अभिनय गर्नु भएको छ ?
– छ नि तर रिलिज भएका छैनन् । सबै चलचित्रहरू रिलिजको क्रममा छन् । जस्तै : टिनएज, विच्छी, द मोङ्गोलिएन हट, समयको माग लगायत चलचित्रमा मेरो अभिनय रहेको छ ।
उपन्यास पढ्छु । कविता गजल पनि मनपर्छ ।
नेपाली गीत संगीतको भविष्यलाई राम्रो देख्ने तर वर्तमान समयमा नेपाली गीत संगीतको क्षेत्र व्यापक बन्दै गएको भएपनि हाम्रा गीत संगीतमा सस्कृति भन्दा पनि माया प्रेमका सन्दर्भहरू बढि समेटिने गरेको बताउछिन् ।
वर्तमान यूवा पुस्ताहरू माया र प्रेमलाई बढि महत्व राख्ने भएका कारण पनि संस्कृति र पर्यटनको विषयहरू कम भएको बताईन् । यसो किन भएको हो भनेर प्रश्न गर्दा जवाफमा भनिन्,‘उमेरको कारणले यस्तो हुन्छ, उमेरले मान्छेलाई प्रभाव पार्ने भएर पनि हो।’
प्रेमको सन्दर्भमा खुल्न आनाकानि गरेकि खड्काले आफु प्रेममा नमुछिएको बताउँदै गर्दा यस्तो अनभिज्ञता जाहेर गरिकी हुन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बि.बि.एस दोस्रो बर्षमा अध्ययन गर्दै गरेकि खड्का आफूलाई बुझ्ने, आफ्नो क्षेत्रलाई बुझ्ने र नारीलाई सम्मान गर्ने आफु भन्दा अलि ठुलो उमेरको केटासँग प्रेम गर्ने बताउछिन् ।
उनले अभिनय गरेको चलचित्र बिच्छीमा समावेश गीत हुनुस्
चैत्र २५ गतेदेखि सारिका केसी ‘अपरिचित’मा....
करन र ऐश्वर्याको सम्बन्धमा पुर्णबिराम....